သူတို့မှားနေတယ်။ မင်းမလုံလောက်ဘူး Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 24, 2015 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 25, 2015 Douglas Karr
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကလူတွေကိုတွစ်တာတွေမသုံးဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ဒါဟာအဓိကအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည် ဘာဖြစ်လို့လူတွေ Twitter ကိုမင်းကိုမခေါ်တာလဲ။ နှစ်အနည်းငယ်မြန်မြန်ရှေ့သို့ချီ။ Twitter သည်တစ်နာရီလျှင် chirps အနည်းငယ်မှသည် autoposts၊ account အတုများ၊ spamers နှင့်အချက်အလက်များကိုမည်သည့်သက်တောင့်သက်သာမျှဖြင့်မကြေငြာနိုင်သည့်အမြန်နှုန်းဖြင့်နားမကြားနိုင်အောင်အသံကျယ်သွားသည်။
အမှန်မှာ၊ သင်သည်ကျယ်လောင်သောအခန်းတစ်ခန်းတွင်အာရုံစိုက်ရန်ကြိုးစားနေပါကသင်၏အသံကိုမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရန်လိုသည်။ တွစ်တာဟာအသံကျယ်တဲ့အခန်းတစ်ခုပါ။
ငါဆက်ဖတ်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို အွန်လိုင်းတွစ်တာနှင့်ပတ်သက်။ နှင့်အတူ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခံရဖို့ဆက်လက် Tweet ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန် နှင့် အရမ်းတွစ်တာ။ ငါဒါတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာသေးငယ်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုသာပြုလုပ်ရုံသာမက Twitter ကိုဖောက်ခွဲခဲ့ပါတယ်။
အသံကျယ်တဲ့အခန်းထဲမှာအော်တာကိုကြိုက်လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထပ်ခါတလဲလဲကြိုက်သလား။ မဟုတ်ပါ။ ငါအချို့လူတွေကငါ့ကိုပေးတော့မယ့်အကြံဥာဏ်ကပြproblemနာကိုပိုဆိုးစေပြီးဖြေရှင်းဖို့မကူညီဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်သေချာတယ်
ပြproblemနာကငါနဲ့မတူဘူး။ ပြproblemနာကအခန်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာနေ့တိုင်း Twitterverse ကိုကျွန်တော်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီးတန်ဖိုး၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတွစ်တာကိုကျွန်တော်ငြီးငွေ့လာတယ်။ ငါသည်ငါ၏အစာကျွေးခြင်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်စကားပြောဆိုမှု၏အနည်းငယ်ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးရှိသည်။
နေ့တိုင်းလိုလိုငါ spammer တွေကိုပိတ်ထားတယ်။ ငါသူတို့စာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဆီမှာမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲရှိတယ်။ အလေးအနက်ထားပြောရလျှင်၊ Twitter သည်သူတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲမပြုလုပ်မိစေရန်အကောင့်များတွင်စီစစ်ရန်ဘယ်လောက်ခက်ခဲသနည်း။ !
တွစ်တာမှတဆင့်မျှဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမချင်းကျွန်ုပ်ချိုးဖောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ငါ၏အလူမှုမီဒီယာလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ။ အိုး ... အဲဒါအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်
တစ်နာရီလျှင် ၂၄ နာရီစီတွယ်ခြင်း
Jenn ကကျွန်တော့်ကို WordPress plugin တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် ဟောငျး Post ကိုပြန်လည်ရှင်သန်။ အခမဲ့ဗားရှင်းရှိနေစဉ်၊ မယုံနိုင်လောက်တဲ့ Pro ဗားရှင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ထပ်ဆောင်းအင်္ဂါရပ်များကိုပေးဆပ်ရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ဗားရှင်းတွင်နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိပြီးသင်၏အကြောင်းအရာများကိုတွန်းအားပေးနိုင်စွမ်းပိုကောင်းစေသည် အသားပေးပုံရိပ်နှင့်အတူ WordPress မှတိုက်ရိုက်။ အဆိုပါပလပ်အင်ကိုလည်းခွင့်ပြုပါတယ် Bit.ly သင် shared links မှကလစ်နှိပ်ပါမှတဆင့်နှုန်းကိုတိုင်းတာနိုင်အောင်ပေါင်းစည်းမှု။
Twitter Card ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသစ်နှင့်အရင်းအမြစ်အသစ်များကိုစစ်ဆေးပါ http://t.co/UWExub2Dy7 #content #စကားဝှက် pic.twitter.com/MHVgN5zIY6
- စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာ (@martech_zone) ဇြန္လ 24, 2015
ငါနောက်ဆုံးနှစ်တွင် Twitter ပေါ်တွင်နာရီတိုင်းကျပန်းအကြောင်းအရာများတင်ရန် plugin ကိုသတ်မှတ်လိုက်သည်။ တစ်နေ့ကို update ၂ ခုမှ ၄ ခုတင်လေ့ရှိပြီးယခုငါတစ်ရက်လျှင် ၂၄ မှ ၃၀ ကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဆူညံသံများစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နောက်လိုက်များအားလုံးဆုံးရှုံးပြီးတိုင်ကီ၌ကျွန်ုပ်၏ပါ ၀ င်မှုကိုမောင်းနှင်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လိမ့်မည်။ Nope ။
စာရင်းအင်းများမလိမ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Twitter Analytics နှင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏ Google Analytics ကလည်း၎င်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော့်ကိုပြောပါသည်။ ဒီမှာပြိုပျက်သည်။
ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှုန်း 0.5% မှ 2.1% ကျော်!
Impressions ကို Tweet လုပ်ပါ 159.5 မှ UP 322,000% ။
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း 45.6 မှ UP 2,080% ။
နောက်လိုက် UP 216 မှ 42,600 ။
Retweet 105.0 မှ UP 900% ။
သငျသညျချိတ်ဆက် Tweets 34.3 မှ UP 6,352% ။
Twitter မှဆိုက်အသွားအလာ 238.7 လာရောက်လည်ပတ်သူမှ 1,952% UP ။
ဒီစာရင်းဇယားတွေနဲ့ဘယ်လိုငြင်းခုံရမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။ ငါနောက်လိုက်တွေမဆုံးရှုံးဘူး၊ ငါထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဆုံးရှုံးကြပြီမဟုတ်, ကလေးဆ။ ငါ site ကိုလည်ပတ်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီမဟုတ်, သူတို့နှစ်ဆပါတယ်။ မက်ထရစ်တိုင်းကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောတွစ်တာအရေအတွက်ကိုများပြားစွာတိုးမြှင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တွစ်တာတွင်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည်ကိုထောက်ပြသည်။
အဘယ်ကြောင့်? ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိနောက်လိုက်များကိုအနှောက်အယှက်မပေးရုံသာမကကျွန်ုပ်၏ tweets များကိုပိုမိုမြင်တွေ့ရပြီးပိုမို retweet လုပ်ကာပိုမိုနှိပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသာထင်ရှားပါသည်။ ငါနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်မင်းကအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့လမ်းပေါ်မှာကားမောင်းနေတာပဲ၊ သင့်ရဲ့ billboard ကိုမြင်လျှင်အသွားအလာအခွင့်အလမ်းတွေကိုတော်တော်လေးပါးလွှာသည်။ အကယ်၍ သင်တစ်မိုင်တိုင်းသို့မဟုတ်လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုထားနိုင်လျှင်မြင်တွေ့ရမည့်အခွင့်အလမ်းများမှာ ပို၍ ကောင်းသည်။
တွစ်တာပေါ်တွင်သင်၏ဆူညံသံကိုဆူညံအောင်လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဥပမာကိုအားမကိုးပါနှင့်။ တွစ်တာကဒ်များကိုတန်ဖိုးရှိသောအကြောင်းအရာများနှင့်မျှဝေရုံသာဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ငါသည်လည်း Tweet အတိအကျကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်မျှဝေမျှရန်မကြောက်ပါ။ သင်၏နောက်လိုက်များသည်တစ်ကြိမ်ထက်မကမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်၏တွစ်တာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုနှုန်းကိုနှစ်ဆတိုး။ သင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြည့်ပါ analytics။ ဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထပ်ထပ်ထပ်ကြိုးစားပါ။ မှတ်ချက်များတွင်မည်သို့ပါဝင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။
ထုတ်ဖော်: My ဟောငျး Post ကိုပြန်လည်ရှင်သန် link ကိုတစ် ဦး Affiliate link ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါအရမ်းသဘောကျတယ်ဒါနဲ့သူတို့နဲ့လက်တွဲဖို့လက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်။
Tags: autopostအဟောင်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပါအဟောင်းကို post ကိုလိုလားသူပြန်လည်ရှင်သန်wordpress လူမှုရေးအချိန်ဇယားကိုလူမှုရေး wordpress ကိုပေါင်းစည်းမှုတွစ်တာwordpress လူမှုရေး
5:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 45